SERANAM-PIARAMANIDINA ANTANANARIVO SY NOSY BE : MAHAVELOMBOLO NY EZAKA NATAO ETO AMIN’NY FAMPIVELARANA NY FITANTEANA AN’ABAKABAKA - Ravinala Airports
SERANAM-PIARAMANIDINA ANTANANARIVO SY NOSY BE : MAHAVELOMBOLO NY EZAKA NATAO ETO AMIN’NY FAMPIVELARANA NY FITANTEANA AN’ABAKABAKA
Tafakatra 1 tapitrisa ny mpandeha voaisa ho an’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan’Antananarivo raha 216.000 kosa izany ho an’i Nosy Be. Azo lazaina fa tena feno sy zina ny taona 2019 ho an’ny Ravinala Airports teo amin’ny asa niandry sy teo amin’ny vokatra azo.
Ny taon-dasa teo dia nahazo ny amboara Routes Africa Award 2019 ny Ravinala Airports, amboara izay azo noho ny haavo lentan’ny haivarotra na “marketing” sy ny ezaka natao hampivoarana ny seranam-piaramanidina. Ireo kaompaniam-pitaterana an’abakabaka ihany no manao ny fifidianana ka ny hatsaran’ny fomba fiasa no tsaraina amin’izany. Tao anatin’ny sokajin-tseranam-piaramanidina mahazaka mpandeha latsaky ny 4 tapitrisa no nahazoan’ny seranam-piaramanidin’Antananarivo ity amboara ity, nanoloana ny seranam-piaramanidin’i Soudan, Ouganda, Angola sy Cap Vert.
Ny isan’ny mpandeha 1 tapitrisa tratran’ny seranam-piaramanidin’Antananarivo ity no tena nanamarika ny taona 2019. Voalohany tato anatin’ny 20 taona no nahatrarana izany isa izany teo amin’ny tantaran’ny fitaterana an’abakabaka malagasy. Talohan’ny nandraisan’ny Ravinala Airports ireo seranam-piaramanidina izay tantaniny, ny taona 2016, dia 845.344 ireo mpandeha ho an’ny seranam-piaramanidin’Antananarivo. Miisa 147.236 kosa izany ho an’ny seranam-piaramanidina Nosy Be, ny taona 2016 ihany. Tamin’ny faran’ny taona 2019, tafiakatra 216.000 izany tarehimarika izany.
Hisokatra tsy ho ela, amin’ity taona 2020 ity, ny seranana iraisam-pirenena vaovao. Inoana fa anisany hampiakatra io ny isan’ny mpandeha izany ary hampitombo ihany koa ny taham-pivoaran’ny sidina izay 7% ny taona lasa.
Ravinala Airports sy ny fampivelarana ny fitanterana an’abakabaka
Tsy mionona amin’ny fitantanana ny seranam-piaramanidin’Antananarivo sy Nosy Be ny Ravinala Airports fa miasa mafy handrisika ireo kaompaniam-pitanterana hafa ny amin’ny hanokafana zotran-tsidina vaovao ho an’ny Madagascar. Everina hahita tombony ny sehatry ny fizahantany iray manontolo satria hampiakatra ny isan’ny mpizaha tany izany ary koa hanokatra sehatr’asa vaovao maro. Ho trandrahana sy araraotina ny maha eto amin’ny faritra Ranomasimbe Indiana an’i Madagasikara, indrindra ny fisian’ireo firenen-dehibe toa an’ny Nosy Maorisy, La Reunion ary Afrika Atsimo.
Mbola anatin’ireo toerana anisany mahasarika ny mpizaha tany i Madagasikara. Ny tetikasa miompana amin’ny fampivelarana ny fitanterana an’abakabaka na “Route development” no hikasan’ny Ravinala Airports hanatsarana ny lazan’i Madagasikara amin’ny alalan’ny fanamafisana ny fifandraisana amin’ireo “hubs” ao “Moyen Orient” tahaka an’i Emirats.
Ho an’ny taona 2020 arak’izany dia fanatsarana ny fifandraisana amin’ireo “hubs” lehibe ireo no tanjon’ny “Route Development” ho an’ny seranam-piaramanidin’Antananarivo. Vokatra andrasana amin’izany ny hampitombo betsaka ny sidina mankany Eropa (Alemana, Italy, Angletera…) amin’ny alalan’ny fampiroboroboana ny “Short stay trips” na fivahinianana latsaky ny herinandro amin’ny toerana iray. Toa izany koa ny amin’ny seranam-piaramanidina Nosy Be, dia ny hampiroboroboana ny “short stay trips”, ny hisarihana ny fizahantany amoron-tsiraka any Eropa ary hananganana fiaraha-miasa amin’ireo “Tours operators”.